N’okpuru mmiri Malta: Ebe izizi Virtual Museum na Mediterenian
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » N’okpuru mmiri Malta: Ebe izizi Virtual Museum na Mediterenian
LR - Onye Beaufighter; Egbe Ricasoli; onyonyo nile sitere na Mahadum Malta / Underwater Malta
Malta ka malitere The Virtual Museum - N'okpuru mmiri Malta, nke mbụ ụdị ya na Mediterenian. Afọ atọ a na-eme ya, Museumlọ ihe ngosi nka Virtual bụ ụzọ ọhụrụ na ụzọ ọhụụ maka ndị na-ekiri iji nweta ebe a na-egwu mmiri na Malta. Ebumnuche nke ọrụ ahụ bụ ka ndị mmadụ hụ echiche panorama dị n'okpuru mmiri nke a na-ahụkarị site na imikpu n'ime ime Mediterranean. Enweela Malta dị ka otu n'ime saịtị mmiri kachasị elu nke ụwa, ma enwere olile anya na tlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmiri n'okpuru mmiri ga-adọta ọtụtụ ndị ọzọ na Malta.
Ihe oru ngo Malta n'okpuru mmiri, gosipụtara saịtị 10 iji malite, yana mmekorita ya na Malta Tourism Authority (MTA), Mahadum Malta, na Heritage Malta. Museumlọ ngosi Virtual Museum - Malta n'okpuru mmiri na-eji ụdị 3-D, vidiyo VR, na foto, ihe si na afọ ise na-achịkọta ihe oyiyi na data na-enye ndị na-ege ntị ohere inweta ahụmịhe nyocha mmiri n'okpuru mmiri.
Ogbu mmiri nke saịtị ndị ahụ sitere na 2 mita (ihe dịka ụkwụ 7) ruo 110m. (ihe dị ka ụkwụ 361) Ọ bụ ezie na mbido mbụ gosipụtara saịtị 10, enwere olile anya na 10 ọzọ ga-agbakwunye site na njedebe nke 2020 na ọbụna karịa na 2021. Ebe 10 dị ugbu a na-enyocha ụgbọ mmiri, ụgbọelu ụgbọelu, ụgbọ mmiri okpuru mmiri, na saịtị ndị ọzọ bụ n'akụkụ ụsọ oké osimiri Malta. Saịtị etinyere gụnyere B24 Liberator, JU88, Phoenician Shipwreck, HMS Stubborn, Victorian Guns, Xlighter 127, Beaufighter, Schnellboot S-31, Fairey Swordfish, na HMS Maori.
Prọfesọ Tim Gambin, nke Mahadum Malta, kwuru na “echiche nke thelọ Ngosi ahụ gosipụtara ịdị mkpa nke ihe nketa Malta nke a pụrụ ịchọta nanị n’ime mmiri. Ihe anyi huru taa bu nkpuru ugwu a. Enwere nnyocha siri ike emere n'azụ ọrụ a site na iji usoro mgbasa ozi na teknụzụ dị iche iche kpughee ebe 10 ahụ n'ịntanetị ugbu a.
Onye isi ochichi na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Malta bụ Gavin Gulia kwuru na “nke a bụ nke mbụ, ọ bụghị naanị maka Malta, kama maka mpaghara Mediterenian dum. Virlọ ihe ngosi nka nke Virtual ga-emekwa ka njem nlegharị na-atọ anyị ụtọ. ” Gulia kwuru na na 2019 e nwere ihe karịrị 100,000 ndị njem nleta na-eleta Malta bụ ndị sonyere na ọrụ ndakpu mmiri. Gulia kwukwara, “Ọrụ a dị n'okpuru mmiri Malta ga-emekwa ka ọtụtụ ihe ndị ọdịbendị Malta nwee maka ndị njem niile, ọ bụghị naanị ndị dị iche iche.
Usoro nchekwa maka ndị njem
Malta ewepụtala broshuọ dị n'ịntanetị, Malta, Anwụ na-acha & Nchekwa, nke gosipụtara usoro nchekwa na usoro nchekwa niile nke gọọmentị Maltese etinyebere maka ụlọ oriri na nkwari akụ niile, ụlọ mmanya, ụlọ nri, klọb, ụsọ mmiri dabere na nleghara anya mmekọrịta na nnwale.
Agwaetiti ndị anwụ na-acha na Malta, n'etiti Oké Osimiri Mediterenian, bụ ebe obibi maka ịchebe kachasị dị egwu nke ihe nketa na-emebibeghị, gụnyere nke kachasị elu nke UNESCO World Heritage saịtị na mba ọ bụla-steeti ebe ọ bụla. Valletta wuru ndị Knights dị mpako nke St John bụ otu n'ime saịtị UNESCO ma bụrụ European Capital nke Omenala maka afọ 2018. Ebumnuche Malta na nkume sitere na ụlọ ọrụ mbadamba nkume kacha ochie na ụwa, rue otu n'ime Alaeze Ukwu Britain kacha. egwu usoro nchebe, ma gunyere otutu ulo, okpukperechi na ulo ndi agha site na mgbe ochie, nke ochie na oge mbu. Site na ihu igwe na-achasi ike, osimiri mara mma, ndụ abalị na-eme nke ọma na afọ 7,000 nke akụkọ na-atọ ụtọ, enwere nnukwu ọrụ ịhụ na ime. Maka ozi ndị ọzọ na Malta, gaa na www.visitmalta.com